Agaasimaha Guud Ee Wasaaradda Waxbarashadda Oo Soo Xidhay Kulan Lagu Tababaraye Macalimin Iyo Xabiiro Ka Socoda Xafiiska Mahiijta | Dhamays Media Group
Agaasimaha Guud Ee Wasaaradda Waxbarashadda Oo Soo Xidhay Kulan Lagu Tababaraye Macalimin Iyo Xabiiro Ka Socoda Xafiiska Mahiijta
Hargeysa(Dhamaysa)_Agaasimaha Guud ee wasaaradda Waxbarashadda iyo Tacliinta Sare ee Somaliland ayaa soo xidhay shir lagu lafagurayey isla markaana dib u eegis lagu sameeyey manhajka waxbarasho ee dugsiyadda sare, shirkaasi oo mudo seddex maalmood ahaa ka socday hudheelka Imperial ee magaaladda hargaysa. Ujeedada dib u eegista manhajka oo ahayd sidii loo awdi lahaa wixii god-daloolooyin ah eek a soo baxa manhajka ayaa waxa ka mid ahaa khabiiradii dib u eegista ku sameeyey muqararka koox ka mid ah macalimiinta iyo aqoon-yahanka wasaaradda waxbarashadda iyo tacliinta sare kuwaasi oo ay kaabayeen khabiir ay soo casuuntay hay’adda AET oo wada shaqayn la leh wasaaradda waxbarashadda Somaliland.
Wasaaradda waxbarashadda iyo tacliinta sare ayaa sanadihii u danbeeyey ku hawlanayd sidii ay kor ugu qaadi lahayd tayadda iyo hanaanka waxbarasho ee dalku leeyahay, haddii ay tahay dhinaca tababarka macalimiinta, la dagaalanka qishka iyo habaynta iyo hagaajinta Manhajka waxbarasho ee dalku leeyahay. Haddaba shirkan oo ahaa shirar is daba joog ahaa oo ay wasaaradda waxbarashaddu ku tayeynaysay muqararka waxbarasho ee dalka ayaa waxa dib la iskula eegay macluumaadkii iyo dhaliilihii uu yeeshay manhajkii cusbaa ee sanad dugsiyeedkii hore lagu bilaabay dugsiyadda dalka gaar ahaan kuwa sare, waxaanay aqoonyahanka hawshan ku hawlanaa is barbar dhig ku sameeyeen manhajka Somaliland iyo ka dalka kiiniya. Maadooyinka kulankan diiradda lagu saaray waxa ka mid ahaa guud ahaan Sayniska iyo luuqadda ingiriisiga.
Waxa shirkan ka soo qayb-galay Agaasimaha Guud ee wasaaradda Waxbarashadda iyo tacliinta sare mudane Cabdi Cali Jaamac, Agaasinka Waaxda Manaahijta Mudane Cabdilaahi Yaasiin, Madaxa Mashaariicda Hay’adda AET mudane Axmed Cabdilaahi Maxamed, Khabiir ka socotay Xafiiska AET ee Nayroobi Marwo Garays oo iyadu la talin ahaan kula shaqaynaysay mudadii ay kooxdani hawsha wadeen, Macalimiin iyo aqoon-yahano kale oo ka socday xafiiska manaahijta ee wasaaradda waxbarashadda iyo tacliinta sare.
Waxa shirkaasi ugu horeyn ka war bixiyey Madaxa Mashaariicdda Hay’adda AET oo iyagu maalgaliyey shirkan, mudane Axmed waxaanu ka xog-waramay waxyaabihii ay isla eegeen mudadii seddexda cisho ahayd ee ay ku sugnaayeen goobtii uu ka dhacay shirku, isaga oo arrimahaasi iyo kuwa kale ba ka hadlaya waxa uu yidhi; mudadii aanu ku gudo jirnay falanqaynta muqararka waxyaabihii ugu mudnaa ee aan isla eegnay waxa ka mid ahaa sida loo qiimeeyo agabka waxbarasho ee manhajka salka u ah, waxan sidoo kale is barbar dhig ku samaynay manhajka Somaliland iyo ka kiiniya, ka dib falanqayn dheer waxa noo soo baxday in manhajkeenu wali qabyo ka jirto sidaa darteedna uu u baahan yahay in la sii horumariyo oo la kobciyo, sidaa awgeed waxan isla qaadanay in aan sii horumarino isla markaana aanu soo saarno mid aad u casriyeysan oo la jaanqaadi kara hanaanka waxbarasho ee dunida.
Sidoo kale waxa iyaduna munaasibadaasi hadalo ka soo jeedisay khabiirka aqoonta dheeraadka ah u leh dhinaca manaahijta marwo Garays oo iyadu ka tirsan xafiiska AET ee nayroobi, waxaanay la talin ahaan kula shaqaynaysay kooxdan, iyado oo arrimahaasi ka hadlaysana waxay tidhi; waxa ii farxad ah in aan idinkala qaybgalo shirkan qiimaha leh ee aad dib ugu qiimaynaysaan manhajkiina waxbarasho si aad ula jaan-qaadaan dunida inteeda kale. Manhajku maaha wax markaliya inta la dejiyo faraha laga qaado laakiin waxa uu mar walba u baahan yahay in la joogteeyo horumarintiisa waayo aqoonta iyo hababka waxbarasho waa kuwa mar kasta horumaraya sidaa darteed waa in aan halkaa lagu dayn.
Mudane agaasime seddexdii maalmood ee aanu halkan joognay waxan soo qabanay hawlo ay ka mid yihiin naaqishaad iyo dib u eegis aan ku samaynay manhajka haddii ay tahay dhinca macalinka casharka bixinaya iyo xeeladaha uu adeegsanayo si uu ugu gudbiyo casharadda ardayda uu wax u dhigayo, maadooyinka aan sida laxaadka leh u eegnayna waxa ka mid ah sayniska iyo luuqadda ingiriisiga. Waxan isku qaybinay laba kooxood oo kala ah; saynis iyo luuqadda, koox waliba waxay soo samaysay wax la taaban karo oo waxbarashadda dugsiyadda wax badan ka badali doona.
Waxa isaguna munaasibadaasi ka hadlay mudane Cabdilaahi Cabdi-Yare oo ku hadlayey afka aqoon-yahankii ku hawlanaa kaabista iyo wax ka bedalka manhajka Somaliland, waxaanu si xeel-dheeri ah uga hadlay manhajka iyo sida uu muhiimka u yahay marka laga hadlayo waxbarasho, waxaanu hadalkiisa ku bilaabay; maanta sida uu yahay xafiiska manaahijta dalkeenu maaha mid ina wadaysa oo horumar ina gaadhsiin karta, sababta oo ah manhajku waa unuga ugu mudan ee waxbarasho leedahay, haddii halkaa qalooc inagaga jirana weligeen meel gaadhimayno sidaa darteed waxan leeyahay xafiiskaasi halaga dhigo mid casriyeysan oo madax banana ama machad daraasaad ku sameeya baylahda iyo heerka waxbarasho ee manhajku xambaarsan yahay.
Maanta waxay wasaaraddu haysataa dhalinyaro aad u firfircoon oo dibadaha iyo dalkaba wax ku soo baratay kuwaasi oo u baahan in laga shaqaysiiyo si ay u soo saaraan wax dalka iyo dadkaba wax tara. Mudane agaasime inantaa Sagal ee nagula jirtay hawshan waxay haysataa shahaadada sare ama Mastarka (Master ate), waxaanay ku soo takhasustay horumarinta manaahijta sidaa darteed waxan soo jeedin lahaa in laga faa’iidaysto cududaa aynu haysano, anaguna waxan diyaar u nahay in aanu xaga danbe u taagnaano oo aanu ku caawino waayo-aragnimadda iyo aqoonta aanu u leenahay guud ahaan horumarinta waxbarashadda.
Agaasimaha xafiiska manaahijta ee wasaaradda waxbarashadda Mudane Cabdilaahi Yaasiin ayaa isaguna shirkaasi ka hadlay waxaanu yidhi; mudane agaasime waxa noo farxad ah in aad nagala soo qayb-gasho shirkan aanu dib ugu qiimaynayno manhajka waxbarasho ee dugsiyadda sare kaasi oo ay ka shaqaynayeen aqoon-yahanka iyo macalimiinta wasaaradda waxbarashadu. Waa markii ugu horeysay ee ay isku yimaadaan khabiiro aad u culus, dabadeedna ay isla lafaguraan wixii qabyo ka jirta manhajka si loo awdo wixii ka soo baxa. Waxa noo soo baxday in aynaan gaadhin heerkii loo baahnaa, waxaana la inooga baahan yahay in aan dedaal muujino si aan u horumarino manhajka kaasi oo u baahan maskax iyo maalba.
Ugu danbayn waxa kulankaasi soo afmeeray agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashadda iyo tacliinta sare mudane cabdi cali jaamac waxaanu hadalkiisa ku bilaabay; sida aan wada ogsoonahay manhajku waa unuga kowaad ee ay waxbarasho leedahay, marka manhaj tayeysan la dejiyo ayey soo bixi karaan arday tayeysan oo la jaan-qaadi karta aduunyadda haddii kale waxa soo baxay kuwo aan manfac lahayn. Haddaan manhaj iyo hab waxbarasho la dejin imtixaan la qaadimaayo, kormeer jiri-maayo waxbarashadduna markaa waxay noqonaysaa jaantaa rogan waxana inoo soo bixi doona jiil afkaar kala gedisan wata kuwaasi oo khalkhal ku ridi kara jiritaanka iyo qaranimadda dalkeena, sidaa darteed wasaarad ahaan waxan heegan ugu jirnaa sidii loo sii horumarin lahaa isla markaana loo hirgalin lahaa manhaj waxbarasho oo guud ahaan dalku leeyahay.
Mustaqbalka dhaw waxa qorshaha noogu jirta in aan xafiiska manaahijta ka dhigno machad madax banaan oo daraasaad iyo cilmi baadhis ku sameeya sidii loo sii horumarin lahaa manhajka dalku leeyahay. Ugu danbayn waxan mahad balaadhan u soo jeedinayaa aqoon-yahanka iyo khabiiradda ka soo shaqeeyey hawshan kuwaasi oo u soo dhabar adaygay mudadii ay hawshan ku jireen, runtii waxad muujiseen karti wadaniyadeed illaahay agtiisana ajar baad ku leedihiin anaguna waan idiin ogsoonahay waxaa aad qabateen
Previous: Daawo Madaxweyne ku xigeenka Somaliland Oo Kulan Lagaga Hadlayey Dardar galinta Taakulaynta Abaaraha La Qataye Guddida Qaran ee Abaaraha iyo Hay’adaha Caalamiga ah ee Dalka ku Sugan
Next: Daawo Guddoomiyaha Xisbal-Xaakimka Somaliland Ee Kulmiye Ayaa Farriin Adag U Diray Madaxweynaha Cusub Ee Soomaaliya Farmaajo